Tag: chengetedzo | Martech Zone
Hatiwanzotaurirana nezvekuchengetedzwa kwepamhepo kana iyo Rima Webhu. Nepo makambani akaita basa rakanaka rekuchengetedza maratidziro emukati, kushanda kubva kumba kwakavhura mabhizinesi ekuwedzera kutyisidzira kwekupinda nekubiridzira. 20% emakambani akataura kuti vakatarisana nekutyorwa kwekuchengetedzwa nekuda kwemushandi ari kure. Kutsungirira kubva kumba: COVID-19 kukanganisa kune bhizinesi kuchengetedzeka Kudzivirirwa haisisiri iro chete basa reCTO. Sezvo kuvimba ndiyo mari inonyanya kukosha pa
Imwe yeanonyanya kushamisa manhamba maererano neCOVID-19 uye kukiyiwa ndiko kuwedzera kunoshamisa kwee-commerce zviitiko: COVID-19 yakasimudzira zvakanyanya kukura kwee-commerce, sekureva kwemushumo weAdobe wakaburitswa nhasi. Yese mari yekushandisa pamhepo muna Chivabvu yakarova $ 82.5 bhiriyoni, kukwira 77% gore-pamusoro-gore. John Koetsier, COVID-19 Akawedzera E-Commerce Kukura '4 Kumakore matanhatu' Hakuna indasitiri isina kubatika… misangano yakaenda chaiyo, zvikoro zvakatamira kune manejimendi ekudzidza uye online, zvitoro
Svondo, May 10, 2020 Svondo, May 10, 2020 Douglas Karr
Maitiro ekushambadzira ekunze akabatwa podcast feed seyakajairwa feed mukati meako WordPress muenzaniso.
Chishanu, May 11, 2018 Natasa Djukanovic
Wanga uchiziva here kuti kwakatenderedza 93% yevashandisi vakatanga yavo yewebhu kushambadzira ruzivo nekutaipa yavo query mune yekutsvaga injini Iyi whopping nhamba haifanire kukushamisa iwe. Sevashandisi veinternet, tajairira iko nyore kuwana chaizvo izvo zvatinoda mukati memasekondi kuburikidza neGoogle. Kunyangwe isu tiri kutsvaga yakavhurika pizza shopu iri padhuze, chidzidzo chekuruka, kana nzvimbo yakanakisa yekutenga mazita echizinda, tinotarisira ipapo
Svondo, Kubvumbi 30, 2017 Chipiri, May 2, 2017 Douglas Karr
Kwevhiki yapfuura, tanga tichiedza kutsvaga password yeiyo account yeYouTube yemutengi. Hapana chimwe chinhu chinowedzera uye chinopambadza nguva yemunhu wese pane kuita izvi. Dambudziko raive rekuti mushandi aingobata account zvakangoerekana asiya kambani - uye kwete pane zvakanakira mazwi. Takaita zvese zvatinogona semurevereri kuyedza kutora password, asi vakati havachaziva kuti chaive chii zvakare. Of